तपाइँको बिक्री र मार्केटिंग पign्क्तिबद्धको मूल्याsess्कन गर्न पाँच प्रश्नहरू Martech Zone
यस उद्धरणले मलाई गत हप्ता साँच्चिकै समाहित गर्यो।
मार्केटिंगको उद्देश्य बेच्नेलाई बेवास्ता गर्नु हो। मार्केटिंगको उद्देश्य ग्राहकलाई राम्ररी चिन्न र बुझ्नु हो कि उत्पाद वा सेवा उसलाई फिट गर्दछ र आफै बेच्छ। पीटर डुकरर
संसाधनहरू संकुचन र औसत बजारका लागि कामको भार बढ्दै, तपाईंको विपणन प्रयासहरूको लक्ष्य दिमागको शीर्षमा राख्न गाह्रो हुन्छ। प्रत्येक दिन हामी कर्मचारी मुद्दाहरू, ईमेलहरूको हमला, डेडलाइन, बजेट ... सबै स्वस्थ व्यवसायको लागि महत्वपूर्ण छ जुनबाट सबै विघटनकर्ताहरूको साथ काम गर्दछौं।
यदि तपाइँ तपाइँको मार्केटिंग प्रयासहरू भुक्तान गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाइँले निरन्तर आधारमा तपाइँको कार्यक्रमको मूल्या must्कन गर्नुपर्दछ र तपाइँको संसाधन कसरी उपयोग भइरहेको छ भनेर माथि राख्नु पर्छ। यहाँ questions प्रश्नहरू छन् तपाईलाई अधिक प्रभावकारी मार्केटि program कार्यक्रममा लैजान सहयोग पुर्‍याउन:
के कर्मचारीहरू छन् जो तपाईंको ग्राहकहरू, वा तिनीहरूका प्रबन्धकहरू, सन्देश प्रवाहको बारेमा सचेत हुनुहुन्छ जुन तपाइँ सञ्चार गर्दै हुनुहुन्छ तपाईंको मार्केटिंग कार्यक्रमको साथ? यो आवश्यक छ, विशेष गरी तपाईंको नयाँ ग्राहकहरूसँग, जुन तपाईंको कर्मचारीहरूले मार्केटिंग र बिक्री प्रक्रियामा सेट गरिएका अपेक्षाहरू बुझ्दछन्। अपेक्षाहरू भन्दा बढि खुशी ग्राहकहरू बनाउँछ.
तपाईंको मार्केटिंग कार्यक्रम हो यो तपाईंको बिक्री स्टाफ बेच्न को लागी सजिलो बनाउँदै तपाईंको उत्पादन वा सेवा? यदि होईन भने क्लाइन्ट रूपान्तरण गर्नका लागि अतिरिक्त रोडबक्सहरूको विश्लेषण गर्नुपर्दछ र त्यसमाथि विजय पाउन रणनीतिहरू समावेश गर्नुपर्दछ।
व्यक्तिगत, टीम र विभागीय हो तपाईको संगठन भरका लक्ष्यहरू तपाईको मार्केटिंग प्रयासहरूसँग उपयुक्त वा उनीहरूको बिरूद्धमा? एक सामान्य उदाहरण एक कम्पनी हो जसले कर्मचारहरूको लागि उत्पादकता लक्ष्यहरू सेट गर्दछ जसले ग्राहक सेवाको गुणस्तरलाई कम गर्दछ, जसले गर्दा तपाईंको अवधारण विपणन प्रयासहरू कमजोर गर्दछ।
के तपाई मापन गर्न सक्षम हुनुहुन्छ? मार्केटिंग लगानी फिर्ता तपाइँको प्रत्येक रणनीति को लागी? धेरै मार्केटरहरू चमकदार वस्तुहरूप्रति आकर्षित हुन्छन् न कि मापन गरी के काम गरिरहेको ठ्याक्कै भन्दा। हामी काम गर्न गुरुत्वाकर्षण गर्छौं जस्तै काम भन्दा बरु गर्न को लागी प्रदान गर्दछ।
के तपाईंले निर्माण गर्नुभयो? तपाईंको मार्केटिंग रणनीतिहरूको नक्शा प्रशोधन गर्नुहोस्? एक प्रक्रिया नक्शा आकार, उद्योग वा स्रोत द्वारा तपाइँको संभावनाहरु को खण्ड संग शुरू हुन्छ ... तब प्रत्येकको आवश्यकता र आपत्तिहरु परिभाषित ... तब केन्द्रीय लक्ष्यहरु मा फिर्ता ड्राइव गर्न उपयुक्त मापन रणनीति कार्यान्वयन।
तपाईंको समग्र मार्केटिंग कार्यक्रममा यस स्तरको विवरण प्रदान गर्नाले तपाईंको कम्पनीको मार्केटि strate रणनीतिहरू भित्र द्वन्द्व र अवसरहरूको लागि तपाईंको आँखा खोल्नेछ। यो एक प्रयास हो कि तपाईंले पछि भन्दा चाँडो गर्नु पर्छ!
टैग: संरेखणकर्मचारीहरुआन्तरिक बजारमार्केटिंग पign्क्तिबद्धताबजार र बिक्रीबजार विवादास्पदमार्केटिंग गोल पign्क्तिबद्धतामार्केटिंग लक्ष्यहरूमार्केटिङ रणनीतिसन्देश पign्क्तिबद्धपीटर डुकररपीटर ड्रकर उद्धरणबिक्री पign्क्तिबद्धबिक्री र बजारबिक्री सक्षमताबिक्री मार्केटिंग पign्क्तिबद्धता
एक सामान्य वेब पृष्ठ जुस गर्न jQuery को प्रयोग गर्दै
मार्स 20, 2009 मा 10: 31 एएम
तपाइँ मेरो भाषा कुरा गर्दै। मैले कहिले पनि बुझ्न सकिनँ कि किन मानिसहरूसँग प्रक्रिया छैन र क्यालेन्डर प्रक्रिया होईन। प्रक्रियाहरू लामो समय सम्म अपडेट हुन्छन् र निरन्तर सुधार हुन्छन्। व्यक्ति सजिलैसँग एकलाई विकास गर्न प्रयास गर्न छोड्छ र यो सबैको लाज हो; कति खराब विचारहरू खराब प्रक्रियाको कारण बर्बाद हुन्छन्?
राम्रो पोस्ट! विशेष गरी, जब तपाईं म जस्तो सोच्दै हुनुहुन्छ! :)
मार्स 20, 2009 मा 11: 37 एएम
कुनै पनि मार्केटिंग प्रक्रियामा यो उत्तम चाल हो। म हाल मेरो कम्पनीको लागि नयाँ मार्केटिंग टेकनीकहरुमा हेर्दै छु र कुनै वास्तविक मार्केटिंग पृष्ठभूमि छैन। यो ब्लग मेरो लागि एक महान उपकरण हो।
मार्क्स 23, 2009 मा 10: 05 PM
दुई संख्या बिक्री लक्ष्यहरू पूरा गर्न महत्त्वपूर्ण छ। मैले ती स्थानहरू देखें जुन उनीहरूले मार्केटिंग भने, बिक्री रोकथाम टोली!
श्री ड्रकरको उद्धरण, आदरको साथ, केहि मायोपिक छ। कुराकानी हुनु पर्छ:
? बिक्रीको उद्देश्य, त्यसोभए, मार्केटिंगलाई अनावश्यक बनाउने छ? बिक्रीको उद्देश्य भनेको ग्राहकसँग यति राम्रोसँग सम्बन्धित छ कि उत्पादन वा सेवालाई मार्केटिंग गर्न आवश्यक छैन?
- परिणाम को एक छैन